मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | नेपालमा थप एक हजार ९६ मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
नेपालमा थप एक हजार ९६ मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
काठमाडौं- नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप एक हजार ९६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर पाँच हजार ८४ नमूनाको पिसिआर परीक्षण र ६९९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको थियो ।
यसमध्ये पिसिआर विधिबाट एक हजार १५ जना र एन्टिजेन विधिबाट ८१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यससँगै नेपालमा कूल सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख ८४ हजार ६७३ पुगेको छ ।कूल सङ्क्रमितमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ४३५ जना छन् । तीमध्ये भक्तपुरमा ४५, ललितपुरमा ६४ र काठमाडौँमा ३२६ जना छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर छ हजार २९० जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । त्यस्तै संस्थागत आइसोलेशनमा ५७६ जना र होम आइसोलेशनमा पाँच हजार ७१४ जना रहेका छन् ।
यस्तै देशभर ११६ जना आइसियु र ४६ जना सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा उपचारत छन् । गत २४ घण्टामा २६२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै निको हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ७५ हजार ३०० पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै देशभर ८५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन हजार ८३ जना पुगेको छ ।रासस
पुर्वमन्त्री बस्नेतले गरिदिए सिन्धुपाल्चोकका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको कोरोना बिमा
बाजुराका निजी क्षेत्रका एक स्वास्थ्यकर्मीको सरकारलाई प्रश्न ?
गाँजा खाँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा र बेफाइदा
कोरोनाभाइरसको प्रमुख लक्षण रुघा नभएको अध्ययनको निष्कर्ष
रतुवामाईमा थपिए 8 संक्रमित, संक्रमितको सङ्ख्या 64 पुग्यो
भोलिबाट मर्निङ्ग वाक नजाऔं, घरबाट बाहिर ननिस्कौं : स्वास्थ्य मन्त्रालय
सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको प्रकोप मौसमी रुघाखोकीः स्वास्थ्य मन्त्रालय